AFG Pilatus PC 12 2 afọ 3 ọnwa gara aga #1038
Enwere atụmatụ iji mepụta AFG Pilatus PC 12 maka FSX/ SE? Achọtala m ụfọdụ ma enweghị m ike iji wụnye ya FSX/ G SE.
AFG Pilatus PC 12 2 afọ 3 ọnwa gara aga #1039
Edition nwere mbipụta boxed nke FSX? Ma ọ bụ Steam? simivation.com nwere ihe nlere a ma etinye m ya FSX enweghị nsogbu, Nke a bụ otu site na ịmegharị flyaway
Mgbe ụfọdụ nbudata ndị a ga-agbakwunye nchekwa ọzọ nke ga - eme ka FSX Mpempe ụgbọ elu ka ịgụọ faịlị nke ọma. Iji zere nyocha a na enwere naanị otu folda nke nwere aha ụgbọ elu dị na ya. Ozugbo ị mepee folda ahụ, ọ kwesịrị igosipụta ya ozugbo, ihe nlereanya, panel, CFG wdg .... Ọ bụrụ na ịkwesịrị imepe folda abụọ iji nweta ozi a, FSX agaghị agụ faịlụ ahụ. Nwere olile anya na ọ kọwaara gị ya.
Ozugbo ibudatara faịlụ a, kama itinye ya na FSX Ebe nchekwa nke ikuku .. Wepụta ya na desktọpụ gị. Mpempe akwụkwọ atọ ga-apụta Ha bụ:
flyawaysim ... doc faịlụ
Gaa na Fly Away file link.
Hichapụ ihe niile ma nchekwa PC-12X
Mepee folda PC-12X na folda ọzọ pụtara: AFGPC12X. Nke a bụ folda ị ga-achọ i copyomi nke gị FSX / simobjects / Ikuku nchekwa. Pinye aka nri na folda AFGPC12X ma hota i ,omi, pinye aka na folda ahu n’ime folda ugbo elu FSX... Kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma!
Ndumodu ikpe azu: site DRCW. Ihe kpatara ya: Usoro maka nbudata faịlụ
AFG Pilatus PC 12 2 afọ 3 ọnwa gara aga #1040
Ekele m, enwere M Steam Edition. M gbalịrị ma abụọ, & simviation. enweghị ike inweta onye ọ bụla iji rụọ ọrụ. Aga m agbalị ndụmọdụ gị. chọsie m obi ike.
AFG Pilatus PC 12 2 afọ 3 ọnwa gara aga #1041
Daalụ . Nke ahụ bụ Mgbochi Ọkụ M nọ na-achọ ..... Na-arụ ọrụ Ukwu.Thank gị :)
AFG Pilatus PC 12 2 afọ 3 ọnwa gara aga #1042
Oge ike page: 0.678 sekọnd